စက်တင်ဘာထာဝရ: မေ အင်တာနေရှင် နယ်ကု မ္ပဏီ လီ မီ တက် ကုမ္ပဏီ က မလေး ရှား မှာ လိုင်စင် မရှိပဲ တရားမဝင်သော နည်း လမ်းတွေ သုံးပြီး မြန်မာပြည်မှ လူတွေ ကို လိမ်လည်ပြီး လူ မှောင်ခို လုပ်ဆောင်နေ
မေ အင်တာနေရှင် နယ်ကု မ္ပဏီ လီ မီ တက် ကုမ္ပဏီ က မလေး ရှား မှာ လိုင်စင် မရှိပဲ တရားမဝင်သော နည်း လမ်းတွေ သုံးပြီး မြန်မာပြည်မှ လူတွေ ကို လိမ်လည်ပြီး လူ မှောင်ခို လုပ်ဆောင်နေ
မေ အင်တာနေရှင် နယ်ကု မ္ပဏီ လီ မီ တက်
ှုင/ ၂၄၄၊ဘီ- (၈) ဖလက်၊ လေးထောင့် ကန်လမ်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့  ၊ ရန်ကုန်။
မလေးရှား ဖုန်း ၀၁၀-၈၉၀၀၄၃၇၊ ၀၁၆-၂၉၄၈၆၄၈
အဲ့ ဒီ ကုမ္ပဏီ က မလေး ရှား မှာ လိုင်စင် မရှိပဲ တရားမဝင်သော နည်း လမ်းတွေ သုံးပြီး မြန်မာပြည်မှ လူတွေ ကို လိမ်လည်ပြီး လူ မှောင်ခို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မလေး ရှားက ပွဲစားတွေ နဲ့ ပေါင်ြး့ပီး လုပ်တာပါ။ သူတို့တွေက ကောလင်း ၄ယောက် ၅ယောက်လောက် ကျတာကို အယောက် ၅၀ လောက် ဖြတ်၊ ညှပ ၊်ကပ်တွေ လုပ်ပြီး မလေး ကို ခေါ်သွင်း ခဲတာပါ။ ၂၆. ၁၁.၂၀၁၀ နေက လူ အယောက် ၁၈ ယောက် ။ ၂.၁၁.၂၀၁၀ နေက လူ အယောက် ၂၀ ကျော် နှင့် ၁.၁၂. ၂၀၁၀ နေ့ က လူ၁၈ ယောက် ကိူ အဲအေးရှား လေယာဉ် နဲ့ ည ၆း၀၀ ထွက်ရအောင် မမှန်ကန်သော နည်း လမ်းတွေ သုံးပြီး လူ ကုန်ကူးနေကြပါတယ်။
မလေး ရှား ရောက်တော့ လူတွေကို တိရိစ္ဆာန် တွေ လို ကားပေါ် ပြွတ်သိပ် ခေါ် သွား ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို ရင် လူဝင်မှူ့ ကြီးကြပ်ရေးကိူ ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။ ခုတော့ ဒီလို မဟုတ် ဘူး လေယာဉ် ပေါ် က ဆင်းတာ နဲ့ အသင့် စောင့်နေတဲ ကား ပေါ် တန်းရောက်တော့ တာပဲ ။ မလေးရှား ရောက်တာ လွယ်လိုက်တာဗျာ။
ဒါပေ မဲ့ ကောလင်း တု တွေကြောင့် လူ ၅၂ ယောက် အားလုံး ဒုက္ခရောက် ကုန်တယ်ဗျာ။ အား လုံး က အိုဗာ စတေးတွေ ဖြစ် သွားကြတယ်ဗျာ။ ကျွန် တော် ကတော့ မလေး ရှား နိူင်ငံ PJ မြို့မှာ နေပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ သူတွေ ရဲ့ ဓါတ်ပူံ တွေ လဲ ရှိပါတယ်။ နောက်နေ့ ကျ ရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တာ က နောက် မလေး ၇ှား ကို လာမဲ့ သူတွေ ကို အဲ့ ဒိလို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ လူ ကြီးမင်း အနေ နဲ့ အဲ့ ဒီ တရား မဝင် သော ကုမ္ပဏီကို အရေး ယူ ပေးပါလို့ တိုက်တွန်း ပါရစေ.... မြန် မာ ပြည်က လူတွေ ကို လည်း တဆင့် ဖော်ပြပေးပါလို့ ...ကျေးဇူး တင်စွာဖြင့်.......အီမေလ်သို့ပေးပို့လာသည့်ကိုဖော်ပြပေးပါသည်